ရင်သားပိုးဝင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း - Hello Sayarwon
ရင်သားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ တနည်း ရင်သားရောင်ရမ်းခြင်းဟာ သွေးဆုံးပြီးချိန်မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး တခါတရံမှာ နို့တိုက်နေတဲ့မိခင်တွေမှာပါတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ နို့မတိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရင်သားတစ်သျူးထဲရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ ရောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး နို့သီးခေါင်းအက်ကွဲခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ရင်သားတွင် အဖုအကျိတ်များပေါ်ခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ ပူနေခြင်းတို့သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်သောအခြေအနေတွေမှာဆိုရင် လိုအပ်တာထက်ပိုစောစော ကလေးကိုနို့ဖြတ်ရတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထိုဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းသိပြီး ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲသိရဖို့ ကြည့်လိုရအောင်။
Staphylococcus aureus လို့ခေါ်တဲ့ သာမန်အရေပြားမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတစ်မျိုးကြောင့် ရင်သားရောင်ရမ်းတတ်တယ်။ ထိုဘတ်တီးရီးယားက ထိခိုက်ခြင်းကြောင့်အရေပြားအက်ကွဲခြင်း မှတဆင့် ရင်သားအရေပြား သို့ နို့သီးခေါင်းထဲဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ အဆီတစ်သျူးတွေထဲမှာနေကာ နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရေပြားအက်ကွဲခြင်းတို့ဖြစ်လာစေပါတယ်။ တဖြေးဖြေး ရောင်ရမ်းခြင်းကြီးလာကာ နို့ရည်ပြွန်တွေပါ ပိတ်သွားပါတယ်။ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာထိုအခြေအနေတွေခံစားရတတ်တယ်။ များသောအားဖြင့်မိခင်တွေကနို့ရည်တွေမထုတ်တဲ့အခါ နို့ရည်ပြွန်များခဲလာပြီး ရင်သားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ နို့တိုက်မိခင်မဟုတ်ဘဲ ရင်သားရောင်ရမ်းပါက ရင်သားကင်ဆာလက္ခဏာဖြစ်တယ်။
လည်ပင်း၊ ချိုင်းတို့တွင် အဖုများပေါ်ခြင်း
အဖျား ၃၈.၃ ဆဲလ်စီးယပ်စ်ထက်ကျော်ခြင်း
ထိုအချက်များကြုံရပါက ဆရာဝန်ဆီဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန် သွားတွေ့သင့်ပါတယ်။
ရင်သားရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါကဘတ်တီးရီးယားများဖယ်ပစ်ဖို့၊ နာကျင်မှုသက်သာဖို့ဆေးများစွာသောက်ရနိုင်တယ်။ နာကျင်မှုသက်သာစေသောဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေးများပါနိုင်ပါတယ်။ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး ၁၀ ရက်မှ ၁၄ ရက်လောက်ထိ သောက်ရနိုင်တယ်။ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ပြီး ၁ ရက် ၂ ရက် အကြာမှာ နေရထိုင်ရကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဘတ်တီးရီးယားတွေအကုန်သေအောင် ဆေးအကုန် ပြတ်အောင် သောက်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ရနိုင်တဲ့ အနာပျောက်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးလည်းသောက်ရပါလိမ့်မယ်။
ရင်သားရောင်ရမ်းခြင်းဟာ မိခင်ကျန်းမာရေးသာမက လတ်ဆတ်ကောင်းမွန်တဲ့နို့ရည်မရနိုင်တာကြောင့် ကလေးငယ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စောစီးစွာရှာဖွေသိရှိနိုင်ဖို့ ရင်သားနဲ့ နို့သီးခေါင်းကို ပုံမှန်ဂရုစိုက်စစ်ဆေးနေရပါမယ်။ ထိုနည်းဖြင့်သာ သင့်အခြေအနေကို အလွယ်တကူကုသနိုင်ပြီး မဖြစ်သင့်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုရှောင်နိုင်ကာ သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ဘဝနေ့ရက်အစလေးတွေမှာ လုံလောက်တဲ့နို့ရည်ချိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Breast Infection. http://www.webmd.com/women/guide/breast-infection#1. Accessed November 7, 2016.
Breast Infection. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mastitis/basics/definition/con-20026633. Accessed November 7, 2016.
Breast Infection. https://medlineplus.gov/ency/article/001490.htm. Accessed November 7, 2016.